Foomamka Nutrioton OEM & ODM
Bogga ugu weyn >> Qaaciddada nafaqada ee OEM & ODM
OEM ee Royal Jelly Softgel 1000mg
[Waxqabadka] Yaraynta Cadaadiska Dhiigga
Royal jelly waa nafaqo nafaqo leh oo laga sameeyo shinnida waana cuntada kaliya ee loo helo shinnida boqoradda. Waxay hodan ku tahay nafaqooyinka waxaana ku jira maaddooyinka firfircoon ee 10 nooc oo HDA ​​ah (10 nooc oo Hydroxy-2 decenoic acid) ah. HDA waa maado firfircoon oo muhiim ah oo loo isticmaalo go'aaminta xoogga iyo waxtarka jelly Royal. Jelly Royal waxaa ku jira fiitamiinnada A iyo C, potassium, birta sodium, chromium iyo manganese iyo 20 amino acids.
2.Filinta daciifnimada iyo daalka indhaha;
3. La dagaalanka habka gabowga;
5.Gaaritaanka hurdo nasasho leh;
6.Caawinta ladagaalanka raga iyo dumarka ee madhalaysnimada.